သင်ခန်းစာ: Kindle eBooks မှ DRM ကိုဖယ်ရှားပါ eReaders အားလုံး
သင်ခန်းစာ: Kindle eBooks မှ DRM ကိုဖယ်ရှားပါ
Villamandos | | Amazon Kindle, စာဖတ်သူများ, Kindle လဲ tutorial များ
ဒီနေ့ဒီရိုးရှင်းသော်လည်းပြီးပြည့်စုံသောသင်ခန်းစာမှတဆင့် DRM (Digital Rigths Management) ကိုမော်ဒယ်လ်အားလုံးမှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုလေ့လာပါမည်။ အမေဇုံ e- စာအုပ်တွေ.
ဝီကီပီးဒီးယားတွင်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်အတိုင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းရေးသားခဲ့သည် ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) or DRM (အင်္ဂလိပ်အတွက်အတိုကောက်) ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) ယေဘူယျဝေါဟာရသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ (သို့) စက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်အတွက်ထုတ်ဝေသူများနှင့်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များအသုံးပြုသောထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ application ကို download ချပြီး install လုပ်ရပါမယ် caliber၊ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပြူတာထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားပြီးသားမရှိလျှင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင်ကျယ်ပြန့်သောသင်ခန်းစာကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်
ပါဝင်သည်သော caliber ပြီးဆုံးကို download လုပ်ပါ eBooks များအတွက် DRM ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများ
Caliber သို့ ဝင်၍ ရွေးပါ ဦးစားပေးပြီးနောက် Caliber ၏အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲပါ, အဆင့်မြင့်, ဖြည့် နောက်ဆုံးတော့ ဖိုင်ပလပ်အင်တင်ပါ
ပွိုင့်အမှတ် (၃) တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်ဖိုင်တွဲကိုရှာပါ။ ၎င်းအတွင်း၌ဖိုလ်ဒါတစ်ခုရှိသင့်သည် Caliber Plugins ငါတို့ရွေးသင့်တယ်
၎င်းထဲရှိ .zip ဖိုင်များ၏ပထမဆုံးကိုရွေးပြီးဖွင့်ပါ။ ဖိုင်ကိုဖွင့်မည့်နည်းလမ်းသည်သင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဖိုင်များကို decompress ရန်ပရိုဂရမ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်
ပေးအပ်ခြင်းဖြင့်သင်လက်ခံရမည့်လုံခြုံရေးအကွက်တစ်ခုပေါ်လာမည် ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်
ကိုနှိပ်ပါ accept ပေါ်လာလိမ့်မည်လာမည့် dialog box ထဲမှာ
ဖိုလ်ဒါထဲရှိ module အားလုံးကိုမထည့်မချင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ Caliber plugins များ
အခုကျွန်တော်တို့ configure လုပ်ရမယ် Kindle နှင့် Mobipocket DRM module (၀.၄ ။ ၅) Plugins မျက်နှာပြင်မှ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Kindle မော်ဒယ်၏အမှတ်စဉ်နံပါတ်၊ နေရာများ၊ တုံးတိုများနှင့်အခြားမည်သည့်ဒြပ်စင်မဆိုထည့်သွင်းရမည်
စာနယ်ဇင်းများ Apply နှင့် Close
ယခုငါတို့ download လုပ်ပါ အမေဇုံ Kindle app ကို ကွန်ပျူတာရှိရင်ပုံမှန်လုပ်ထားသလိုမျိုး install လုပ်ထားပြီးပြီ
လျှောက်လွှာထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကော်လံမှာ Archived content ကိုရွေးရမယ်။ Amazon မှာငါတို့ ၀ ယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ်လာသင့်တယ်။ သင်ကူးယူလိုသည့်စာအုပ်များအားလုံးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ
သင်လိုချင်သောအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များ (သို့) သင်ထွက်စစ်ဆေးလိုသည့်စာအုပ်များအားလုံးကိုသင် download လုပ်ပြီးသောအခါ၊ Caliber သို့ပြန် သွား၍ option ကိုရွေးချယ်ပါ။ လမ်းညွှန်မှစာအုပ်များထည့်ပါ, subdirectories အပါအဝငျ
အခုအချိန်မှာငါတို့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ DRM-free စာအုပ်တွေရှိသင့်တယ်။ အကယ်၍ သင်ယခင်ကစာအုပ်များတင်သွင်းပြီးပါက၊ သူတို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ရန်သူတို့ကိုပြန်လည်တင်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်
စာအုပ်များမှ DRM ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်သင်၏အမေဇုံအကောင့်အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်လုပ်သမျှအားလုံးဟာသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလိမ့်မယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Retro iPad နှင့် Kindle အမှုများ
ရင်းမြစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒေါင်းလုပ် - caliber eBooks များအတွက် DRM ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများ အမေဇုံ Kindle App ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » သင်ခန်းစာ: Kindle eBooks မှ DRM ကိုဖယ်ရှားပါ
မူပိုင်ခွင့်များကိုမချိုးဖောက်စေရန် DRM ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းနှင့်အတူသင်စာအုပ်ဝယ်ယူခဲ့သောအသုံးပြုသူ၏အခွင့်အရေးများကိုသင်မစဉ်းစားဘဲ၎င်းကိုအခြားစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖတ်ရှုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ပြီးစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်သကဲ့သို့အိမ်၌သာဖတ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်ထုတ်ယူ။ မရပါ။ ထိုကန့်သတ်ချက် (DRM) ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၊ စာအုပ်ကိုသင်ထုတ်ယူ။ သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်များအားလုံးကိုလိုက်နာပါပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမှတ် (၁၀) တွင်မြဲမြံစွာတည်ရှိသည်။ ထိုမီးပုံကိုမည်သို့မည်ပုံပြင်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးမြောက်ရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြနိူင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒသမမှတ်တွင်အခိုင်အမာရပ်တည်နေသည်မှာအပိုဖြည့်စွက်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်သည် free kindel app ကို ipad အတွက်အသုံးပြုသော အချိန်မှစ၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်မရှိသောအမှတ်စဉ်နံပါတ်ထည့်ရန်လမ်းကိုမမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။
ထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်! ငါဒယ်နီယယ်ဆိုလာကိုသဘောတူတယ်၊ ငါစာအုပ်အတွက်ပိုက်ဆံပေးပြီးကွန်ပျူတာကနေဖတ်ရတာအရမ်းကုန်ကျတယ်။ ငါသာအနည်းငယ်အခန်းကြီးလိုအပ်ပါတယ်ငါမသက်မသာအလုပ်လုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။ ငါစာမျက်နှာ၏နှစ်ဖက်အပေါ်မှတ်စုများရေးသားဖို့ကြိုက်တယ်, ငါမှတ်ချက်များမှတ်ချက်ပေးနိုင်သော်လည်း, ကအတူတူပင်မဟုတ်ပါဘူး။
ငါ Amazon မှ ၀ ယ်ထားသောစာအုပ်ကိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်ဖတ်ရှုသူထံသို့ကူးရန်ဤအရာကိုကြိုးစားနေသည်။
ငါ Linux ကိုသုံးတယ်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့လမ်းမရှိဘူး။ kindle serial နံပါတ်ကို linux တွင်ပြုလုပ်နိုင်ရန် (နောက်ဆုံးထင်သည်) ဆင်းလာသည်။ သို့သော်ပြသနာမှာကျွန်ုပ်သည် kindle ereader မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤတွင် Apple သုံးစွဲသူများအတွက် DRM ကိုဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်
Kindlean နှင့်သင်၏ Kindle ၏စာအုပ် collection များကိုအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: Sony PRS-T1 နှင့် Sony PRS-T2